ဆုချီးမြှင့် Winners | ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် Darin Carter က | ဖေဖော်ဝါရီ 7, 2019 | ဆုချီးမြှင့် Winners
ကျော်ဘို့ 50 နှစ်ပေါင်း, QinetiQ မြောက်အမေရိက (QNA) ကမ္ဘာ့အဆင့်မီနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့ထားပြီး, ကာကွယ်ရေးမှအင်ဂျင်နီယာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တော်လှန်ရေးသမားထုတ်ကုန်, လုံခွုံရေး, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူစျေးကွက်. Our product offerings include unmanned...
အားဖြင့် Darin Carter က | ဖေဖော်ဝါရီ 6, 2019 | ဆုချီးမြှင့် Winners
ယနေ့တွင်, DriveSavers is the worldwide leader in data recovery services and provides the fastest, ရရှိနိုင်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာဆယ်တင်ရေးဝန်ဆောင်မှု. ကျနော်တို့ကျော် employ 90 ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ထောက်ခံမှုကျော် 18,000 စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ. Most of our business comes from...
အားဖြင့် Darin Carter က | ဖေဖော်ဝါရီ 5, 2019 | ဆုချီးမြှင့် Winners
Hello Monday builds better businesses by creating joyful digital ideas, သူတို့ရဲ့စားသုံးသူများ၏နှလုံးသားများမှအမှတ်တံဆိပ်များ၏နှလုံးသားများချိတ်ဆက်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတွေ့အကြုံများ. ကျနော်တို့ကပုံပြင်ကိုပြောပြကြောင်းစွဲငြိဖွယ်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများကိုပါစေနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကျလာသော. We build smart connected...
အားဖြင့် ဂွ | ဇန်နဝါရီ 30, 2019 | ဆုချီးမြှင့် Winners
Sandcastles မင်္ဂလာဆောင်မယ့် Full-service ကိုမင်္ဂလာဆောင်-စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်. Shariful Grenier, တည်ထောင်သူနှင့် Sandcastles ၏ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ, ထို့အပြင်ဓမ္မဆရာစီရင်နေသည်, ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကောင်းစွာအရာရှိများကန်ဆောင်မှုပေးနိုင်. For those wishing to beginacareer in wedding planning, we offer the...
အားဖြင့် ဂွ | ဇန်နဝါရီ 28, 2019 | ဆုချီးမြှင့် Winners
VRarts အွန်လိုင်းထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်အော့ဖ်လိုင်း. ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2009 တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကိုကိုးကားကုမ္ပဏီအများအပြား၏စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဧရိယာ၌အချက်, Marianese ၏ပထမနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အီတလီနှင့်ဥရောပထဲမှာဖြစ်လာ VRarts. VRarts ingloba un’...